ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR : Nanolotra fotodrafitrasa ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra | Madatopinfo
ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR : Nanolotra fotodrafitrasa ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra
Tao anatin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy omaly 8 martsa no nentin’ny Orange solidarité Madagascar nitokana tamin’ny fomba ofisialy ny « Maison digitale pour les femmes ». Lanonana izay natao tetsy amin’ny Boriborintany voalohany ary natrehan’ireo tompon’andraiki-pahefana tao amin’ny Boriborintany I sy II ary ny VI, izy ireo izay nisolotenan’ny Ben’ny Tanàna an’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana. Tonga nanome voninahitra ity fitokanana ity ihany koa ny ekipan’ny Orange solidarité Madagascar izay notarihin’ny Filohany Josie Randriambeloma.
Maro ny vehivavy mahazo tombony amin’ity fotodrafitrasa vaovao ity, ahitana fitaovana rehetra hikirakirana informatika ao anatiny toy ny tablette, imprimante, vidéo projecteur sy ordinateur portable maro. « Efa 12 taona izay no nanaovan’ny Orange solidarité Madagascar ny asa sosialy ho fanomezan-danja ny andavanandron’ny Malagasy toy ny lafiny ara-panabeazana, ny fahasalamana, ny kolontsaina ary tsy mitsahatra ny hanohy izany izahay mba hanampiana ny mpiray tanindrazana », hoy i Josie Randriambeloma nandritra ny lahateniny. Fantatra ihany koa fa tafakatra hatramin’ny 13 ireo « Maisons digitales » efa naorin’ity mpandraharaham-pifandraisana ity ary efa mihoatra ny 600 ireo vehivavy nahazo tombotsoa tamin’izany.
Manampy ny vehivavy hiditra amin’ny sehatra avo lenta kokoa ny fisian’ity « Maison digitale pour les femmes » ity. Ankoatra izay, nahatratra 70 ireo vehivavy nanaraka ny lalam-piofanana tao anatin’ny volana maromaro ka mihoatra ny 40 taona no maro an’isa amin’ireo. 14 mendrika indrindra tamin’ireo kosa nahazo marim-pankasitrahana.